Siyaabaha Loo Kordhiyo Awoodda Xasuusta Maskaxda | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Isticmaalka Saxsan Ee Joogsiga ( . )
10-Qodob Oo Lagu Xalin Karo Dhibaatooyinkaa Haysta Dalkeenna
Qisadii Ibraahim Cabdi “Sanka”
Siyaabaha Loo Kordhiyo Awoodda Xasuusta Maskaxda
Siyaabaha Loo Kordhiyo Awoodda Xasuusta Maskaxda.
Dad badan ayaa dhibsaday ilowshaha sida in ay hilmaamaan ama ay lumiyaan macluumaad muhiima u ah gaar ahaan inta ay dhiganayaan dugsiga ama jaamacadda hadana aan garanay xalki ay uga gudbi lahaayeen dhibatadaas. Laakiin waxaan kuu hayaa talaaboyin kaa saacidayo ka gudbida dhibaatadaas Insha’Allah.
Duceyso waqtiga Salaad iyo markaa Quraanka kariimka ah akhriso. Sidoo kale xusuus noow adkaarta maalin kasta, waxyaabahan oo dhan waxay kordhiyaan raaxada naftaadda iyo jidhkaaga.
Markasto Alle toobad waydiiso maxaa yeelay Alle waa mid toobad aqbal badanee.
Inta aadan kabixin gurigaag akhriso adkaarta Alle ama tuko labo rakaco oo sunno ah Allena ka bari in uu ku halaysiiyo khayrka shartana kaa illaaliyo.
Sirdoonka: “Waa karti ay ku dhalato qofwalbo oo waayo-aragnimo iyo xirfadba leh.”
1- Sirdoonka dabiiciga ah:
Waa awooda qofku si sax ah ula dhaqmaayo sida dabeecaddaha kala duwan iyo abuuritaanka Alle uu siiyay.
1- Sirdoonka Bulshada:
Dadka leh sirdoon bulsho waxay awood u leeyihiin in ay dadka wax ugu qabtaan qaabka soo jiidasho leh oo ay ku isticmaalaan ereyo iyo hababka xirfadeedyo kala dugan waana dad ay dadka kale jecelyihin. Sidoo kale waxay awood u leeyihiin inay wax ka qabtaan dhammaan waxyaalaha soowajaho oo ay aqbalaan fikradaha ku hareeraysan iyaga oo aan walwal iyo walaaca dareemin.
2- Sirdoonka jirku:
Sirdoonka jirka waa awood u lahaanshaha jidhka iyo xakamaynta dhaqdhaqaaqiisa sida jimicsi jireedka kala duwan iyo koontaroolka murqaha.
3- Sirdoorka Aqoonta afka iyo luuqadda:
Waa dad awoodda u leh isticmaalka erayada si sax ah ayaga oo u dhigo una beddelo si macquul ah. sidoo kale waxay awooda u leeyihiin inay wax qoraan sida gabayaaga.
5- Sirdoonka Ruuxiga ah: Aqoonta ruuxiga ahi waa mid ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee sirta ah, wuxuuna leeyahay awood uu ku baddalo noloshiisa. Sirdoonka ruugiga ah wuxuu ku saabsan yahay sidii uu qofku u kasban lahaa horumar wanaagsan.
Shaqooyinka dadka leh sirdoonka ruuxiga ah:
1- Isku-baraarujinta diinta waa mida ugu muhiimasan ee lagu garto qofka leh sirdoonka ruuxiga ah.
2- Qofku wuxuu u arkaa in dunidoo dhan ay ka mid tahay xaqiiqada ballaaran ee Alle abbuuray.
3- Isku biimeynta wax qabad lataaban karo iyo wax soosaar wanaagsan.
4- Aqbalida wax yaabo kala dugan ee dadka dabeecadahooda kamid ah.
5- Qaadashada go’aan wanaagsan markay la kulmaan dhibaatooyin .
Tags: Siyaabaha Loo Kordhiyo Awoodda Xasuusta Maskaxda
Next post 6 Hiwayaddooda oo Taageero Sirdoonka Nolosha
Previous post Waxyaabaha Keena Cudurada Kudhaca Xoolaha
Gabay Ka Hadlaaya Guusha & Socdaalka Nolosha 25.67 views per day | by Maxamuud Axmed Muuse